भुटानी राजाले भने : मेरो जन्मस्थान नेपाल भएकोले भावनात्मक सम्वन्ध छ::local sandesh
भुटानी राजाले भने : मेरो जन्मस्थान नेपाल भएकोले भावनात्मक सम्वन्ध छ
सन्देश सम्वाददाता / शुक्र, कार्तिक १, २०७६
काठमाडौं– भुटानका राजा जिग्मे खेसर नाम्गेल वाङचुकले आफू नेपालमा जन्मेको बताएका छन्। बिहीबार ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउन गएका भुटानका लागि गैरआवासीय राजदूत निलाम्बर आचार्यसँगको संक्षिप्त भेटमा राजा जिग्मेले आफू नेपालमा जन्मेको र नेपालीसँग आफ्नो भावनात्मक सम्बन्ध रहेको बताए । नेपाल र नेपाली जनतासँग मेरो निकट सम्बन्ध छ। भावनात्मक सम्बन्ध छ। किनकी म नेपालमा जन्मेको हो’, राजाको भनाई उद्धृत गर्दै राजदूत आचार्यले भने। राजा जिग्मेले नेपाल र भुटानबीच गहिरो सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको र दुबै देश भूपरिवेष्ठित रहेकाले मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा समेत जोड दिए।
राजा जिग्मेको सन् १९८० मा नेपालको प्रसूति गृहमा जन्म भएको थियो। उनकी आमा छिरङ योङ दोनलेको इच्छाअनुसार उनको जन्म नेपालमा भएको हो। साथै नेपालमा राम्रो अस्पताल भएकाले पनि तत्कालिन रानीको प्रसूति नेपालमा गराइएको थियो। जानकारहरुका अनुसार तत्कालिन रानी छिरङले हलेसी महादेवको मन्दिरमा पूजा गरेको र पुत्रका रुपमा जिग्मेको जन्म भएको पनि बताइन्छ। त्यतिबेला राजा वीरेन्द्रले भुटानी राजपरिवारप्रति सहयोग तथा सद्भाव राखेका थिए। दुबै देशका राजपरिवारबीच घनिष्ठ सम्बन्ध थियो।
राजा जिग्मेसँगको भेटमा राजदूत आचार्यले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको मित्रता सन्देश सुनाएका थिए। आचार्यले उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदान सहित दुबै देशका मैत्री सम्बन्धहरुलाई अझ विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। जवाफमा भुटानका राजाले नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई बधाईसहित शुभकामना दिए। राजदूतलाई सफल कार्यकालको लागि शुभकामना समेत दिए।
राजदूत आचार्यले भुटानी प्रधानमन्त्री डा। लोटे टिसिरिङ्गसँग पनि भेट गरेका थिए। भेटमा नेपाल र भुटानको ऐतिहासिक सांस्कृतिक समानताबारे छलफल भएको थियो। यसअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजा जिग्मेसँग भेट गरेका थिए। सार्क शिखर सम्मेलनका क्रममा भएको भेटमा पनि राजा जिग्मेले आफू नेपालमा जन्मेको विषय स्मरण गरेका थिए। नागरिक न्युजबाट साभार
सिनियर टिममा सुभाषको डेब्यु
समन्वय समितिहरूको समीक्षा बैठक सम्पन्न
माईजोगमाईको नयाँबजारमा १५ दिन सम्म बालाचर्तुदशी मेला
इलाम । संकटा क्लबका मिडफिल्डर सुभाष गुरुङले राष्ट्रिय टिमबाट डेब्यु गरेका छन् । फिफा विश्वकप...
इलाम : इलाम नगरपालिकाले गठन गरेको ७ वटा समन्वय समितिहरूको समीक्षा बैठक आज सम्पन्न भएको...
नयाँबजार । माईजोगमाई गाउँपालिकाको केन्द्र नयाँबजारमा आगामी ६ गते देखि २१ गते सम्म परम्परागत रुपमा...
इलाम नगरपालिकामा दाेश्राे चरणकाे कालिगड तालिम
इलाम । इलाम नगरपालिकाको आयोजनामा घर निर्माण मजदुरहरूका लागि दाेश्रो चरणको कालिगड तालिमको उद्घाटन भएको...
‘इलामे सहर चियाबारी राम्रो ’ को नयाँ भिडियो सार्वजनिक (भिडियो सहित)
इलाम । गंगाराज मुकारुङद्वारा रचित निकै लोकप्रिय गीत ‘इलामे सहर चियाबारी राम्रो त्यहीँ पर्यो घर...
धार्मिक पर्यटकिय क्षेत्र माइपोखरीमा शिवको कलात्मक मुर्ति निर्माण गरिने
इलाम । इलामको एक मात्र रामसार क्षेत्रमा सुचिकृत धार्मिक पर्यटकिय स्थल माइपोखरीमा भगवान शिवको कलात्मक...
पूर्व-पश्‍चिम राजमार्ग नै भारततर्फ !
इलाम : के तपाईं गुगल म्याप चेक गर्नुहुन्छ ? गुगल म्यापले विश्वभरका देशको नक्सा त...
यस्ता छन्, इलाम नगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा कार्यान्वयन भएका १० कार्यक्रम
इलाम । इलाम नगरपालिका इलामको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को पहिलो चौमासिक बैठक सम्पन्न भएको छ...